Sida loo qaabeeyo Huawei qaabka aqrinta shaashadda | Androidsis
Eder Ferreño | | Huawei, Khiyaamada Android
Mar kasta oo aan aragno sida ay isu soo bandhigaan barnaamijyo badan iyo ikhtiyaarro si loo sifeeyo iftiinka buluugga ah in taleefannadeennu soo daayaan. Qaar baa jira codsiyada naga caawin kara arrintan. Intaa waxaa dheer, noocyada taleefannada ayaa sidoo kale soo bandhigaya xulashooyin arrintan la xiriira, taas oo noo oggolaaneysa maamul wanaagsan oo arrintan la xiriirta. Tani waa kiiska taleefannada Huawei, oo noocyadoodii ugu dambeeyay ay leeyihiin waxa loogu yeero hab akhris.
Sidan oo kale, waan sameyn karnaa adoo adeegsanaya taleefankayaga Huawei, laakiin aan lahayn nalka buluuga ah ee dhibsada taasi waa la baahiyaa, taas oo xaalado badan loo arko inay waxyeello u leedahay dadka isticmaala. Qaabkan akhriska ayaa loo hawl gelin karaa loona qaabeyn karaa qaab aad u fudud taleefanka.
Iftiinka buluuga ah wuxuu u sababi karaa indho-fiiqista adeegsadaha, taas oo keeneysa in isticmaalka taleefanka uu noqdo mid raaxada ka yaraada ama aakhirka noqda mid indhaha ka careysiiya, sida indho daalan ama indho cuncun leh mar uun. Intaa waxaa dheer, daraasado ayaa la sameeyay oo lagu raadinayo xiriirka ka dhexeeya iftiinka buluuga ah iyo dhibaatooyinka hurdada. Sababtaas awgeed, inbadan ayaa u aragta inay wanaagsan tahay shaandhayn, gaar ahaan habeenkii. Taasi waa sababta ay sumcadda Shiinuhu u leedahay shaandhada iftiinka buluugga ah, oo ah qaab hanaan akhris ah.
1 Ku dhaqaaji habka akhriska Huawei
2 Habka aqrinta barnaamijka
Ku dhaqaaji habka akhriska Huawei
Telefoonadaas Huawei ee leh Android Pie waxay ka heli karaan qaabkan qaabeynta. Sidaa darteed waa inaan helnaa goobaha qalabka ka dibna gal qaybta shaashadda. Waxaa jira fursado dhowr ah halkaas, mid ka mid ahi yahay Habka Akhriska. Waxaan galnaa iyada oo ikhtiyaarka ugu horeeya ee jira uu yahay in aan dhaqaajino. In sidaa la yeelo, waa inaad dhaqaajisaa biiro shaashadda.
Tallaabooyinkaan ayaan ku kicinay qaabkan akhriska ee taleefanka. Waxaan aragnaa iyadoo tan la sameynayo, shaashadda inay qaadaneyso cod diiran, oo leh midab jaalle badan, tan iyo markii nalka buluuga ah lagu damiyay taleefanka. In kasta oo ikhtiyaarkan lagu dhaqaajinayo uusan ahayn kan kaliya ee ay bixiso shirkadda Huawei, maxaa yeelay waxaan dooran karnaa markii aan dooneyno habkan akhris in si otomaatig ah loogu hawlgeliyo aaladdayada. Wax aad ugu raaxeysan kara isticmaaleyaasha qaar.
Sida loo dajiyo taleefanka Android ee araga naafada ka ah
Habka aqrinta barnaamijka
Daraasado badan ayaa sidaa leh light buluug waa wax na saameynaya waqtiga jiifka. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay inaan dhaqaajino qaabkan aqrinta, taasoo keeneysa in iftiinka buluuga la demiyo, habeenkii. Markaa haddii aan taleefanka adeegsanno intaadan seexan, si aan wax u aqrinno ama aan farriimo u dirno, saameynta ay ku yeelanayso araggeennu waa ka yar tahay, sidoo kale waxaan ka fogaanaynaa culeyska indhaha. Ka sokow inaadan haysan wax nal buluug ah oo taleefanka ka soo baxa habeenkii.
Waayo, Huawei sidoo kale waxay leedahay xulashadan barnaamijka. Waxaan kaliya u baahan tahay inaan ka shaqeyno adoo gujinaya badhanka shaashadda. Markaan sidan yeelno, waxaan dooran karnaa goorta aan dooneyno in habkan akhris ee lagu dhaqaajinayo taleefanka. Waxaa naloo ogol yahay in aan galno waqtiga ay shaqada bilaabaneyso, iyo waliba waqtiga aan rabno in ay shaqeyso oo shaashaduna ay ku soo noqoto qaabkeedii caadiga ahaa. Marka kiiskan isticmaale kasta waa inuu doortaa waxa uu u arko inuu ku habboon yahay kiiskooda. Dareenkan, waa wax ku xiran laxanka qof walba oo taleefanka adeegsada.
Marka saacadaha la doorto, habkan akhris ee Huawei durba waa la hawlgeliyey. Hab wanaagsan oo looga dhigo shaashadda taleefanka inay saameyn yar ku yeelato annaga, aragtidayada ama wakhtiga jiifka. Sidaad u aragto, way fududahay inaad ku dhaqaajiso taleefanka. Ama hal mar markaan isticmaalno ama haddii aan rabno inaan u barnaamij ka dhigno si isdaba joog ah. Sidan oo kale, hayso qaabkan markasta la heli karo, gaar ahaan habeenkii. Weligaa qaabkan taleefankaaga ma ku isticmaashay? Maxaad u maleyneysaa shaqadan ay calaamadda Shiinaha ku bixiso taleefannadeeda casriga ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sida loo qaabeeyo habka akhriska ee Huawei
10-ka casriga ah ee ugu awooda badan bisha May 2019, sida laga soo xigtay AnTuTu